बढ्दाे जाडाेका कारण जोर्नीको दुखाईबाट पिडित हुनुहुन्छ ? अाउनुहाेस् यति कुरा जाने घरमै गर्न सकिन्छ उपचार - ज्ञानविज्ञान
किन हुन्छ जोर्नीको दुखाई ?
जोर्नीलाई कसरी स्वस्थ राख्ने ?
क्याल्सियमयुक्त खाद्यपदार्थ जस्तै दूध, दूधबाट बनेका चीज, ब्रोकाउली, सालमन माछा, पालुंगो, राजमा, बदाम, तोफु आदिको सेवन गर्नुहोस् ।
भिटामिन सी र डी स्वस्थ जोर्नीको लागि उपयोगी हुन्छ । यसैले यसबाट भरपुर खाद्यपदार्थ जस्तै स्ट्रबेरी, सुन्तला, किवी, पाइनापल, काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, दूध, दही माछा आदिको पर्याप्त सेवन गनुैहोस् ।
रक्सी र चुरोट त्याग
फलफूल र घरेलु औषधी
फलफूल र सब्जीहरुको सेवन धेरै मात्रामा गर्नुहोस् । यसले ओस्टियो आर्थाइटिसबाट बच्न सकिन्छ । त्यस्तै जाडो महिनामा अदुवा र बेसारको सेवन गर्नुहोस् । यसले जोर्नी सुन्निने समस्यालाई कम गर्छ ।
सुन्निन बढाउने पदार्थहरु जस्तै नुन, चिनी, मदिरा, क्याफिन, तेल, ट्रान्स फ्याट र रातोमासुको सेवन कम गर्नुहोस् ।
जाडो मौसममा राख्नुहोस् विशेष ध्यान
– जाडो मौसममा जोर्नीको दुखाईले धेरै सताउँछ । किनभने यो मौसममा मानिसहरु आराम धेरै गर्छन् । यसले शारीरिक सक्रियता कम हुन्छ । दिन छोटो र रातो लामो हुने कारणले जीवनशैली परिवर्तन हुन्छ ।
– जाडोमा मानिसको खानपानको बानी पनि परिवर्तन हुन्छ । मानिसहरु व्यायाम गर्न खोज्दैनन जसले यो समस्या अझै बढ्छ ।
–जाडोमा आँटाको रोटी र मुगको दाल सेवन गर्नुहोस् । तातो तातो सुप पिउनुहोस् । हरियो सागसब्जीहरु लौका, फर्सी, काँक्रो, आदिको सेवन गर्नुहोस् ।
–नियमित व्यायाम गर्नुहोस्, शारीरिक रुपमा सक्रिय रहनुहोस् । यसले मांसपेसीलाई खुल्नमा मद्धत मिल्छ र जोर्नीलाई सजिलो बनाउँछ ।
–बाहिर तापक्रम अत्याधिक कम हुन्छ त्यसैले चिसोमा बाहिर धेरै नहिँड्नुहोस् । शरीरलाई सँधै तातो कपडाले ढाक्नुहोस् । पानी धेरै पिउनुहोस्, प्रतिदिन ८-१० गिलास पानी पिउनुहोस् । यदि औषधि सेवन गर्नुहुन्छ भने नियमित समयमा लिनुहोस् ।
–चिसोबाट आफूलाई बँचाउनुहोस् । जुन भागमा दुख्छ त्यस भागलाई न्यानो कपडाले बेर्नुहोस् ।
– जोर्नीको दुखाईसँगै अन्य समस्या जस्तै सुन्निने, रातो देखिने समस्या छ भने तुरुन्त डाक्टरलाई देखाउनुहोस् ।
Topics #जोर्नीको दुखाई #जोर्नीको दुखाईबाट पिडित #हाडजोर्नी दुख्ने समस्या
Don't Miss it यस्तो लक्षण देखिए हुनसक्छ अल्सर, कसरी जोगिने ?
Up Next कम उमेरमै स्मरणशक्ति त गुमाउनु हुदै छैन ? यस्ता कुरामा ध्यान दिनु अति जरुरी हुन्छ
उच्च रक्तचाप र हर्टअट्याकबाट बचाउँने ६ पेय पर्दाथ, नियमित सेवनले हुदैन हर्टअट्याक (भिडियो सहित)
तपाई सुन्न तथा हेर्न मन पराउँनुहुन्छ भने पोस्टको अन्तिममा भिडियो हेर्नुहोला । खानपान शैली र हामी नेपालीको अन्य शारिरिक व्यवहारका…